अष्ट्रेलियाभन्दा चीन कति शक्तिशाली छ ?
अष्ट्रेलियामा एक आठ महिनाको बच्चा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा एक आठ महिनाको बच्चा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको बताइएको छ । योसँगै अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ५७ पुगेको छ । ती बच्चा एक इरानी महिलाको भएको पुष्टि भएको छ ।
पोखराका श्रेष्ठको अष्ट्रेलियामा पौडी खेल्दा डुबेर मृत्यु
काठमाडौँ । पोखरा निबासी निकेश श्रेष्ठको अष्ट्रेलियामा पाैडी खेल्ने क्रममा डुबेर ज्यान गएको छ । बुधबार ब्रिसबेन नजिकैको स्ट्राटब्रुक आईल्याण्डमा रहेको समुद्र किनारमा पौडी खेल्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको हो ।
अष्ट्रेलियामा कस्तो छ कोरोना भाइरसको प्रभाव, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म एक जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै संक्रमण हुनेको संख्या ४२ पुगेको छ । त्यस्तै उपचारपछि निको भएर २१ जना घर फर्किएका छन् ।
यदी अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस फैलियो भने के हुन्छ ?
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइरसले कहर मच्चाइराखेको छ । अष्ट्रेलियामा पनि हालसम्म ३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । केही दिन अगाडि एक ७० वर्षिया वृद्धाको कोरोना भाइसरका कारण मृत्यु भएको रिपोर्ट बाहिर आएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेको छ ।
अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसका कारण एक जनाको मृत्यु
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकी एक जना महिलाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार पश्चिम अष्ट्रेलियामा बस्दै आइरहेकी एक ७९ वर्षिया वृद्धाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको हो । यी १६० जना मध्येकी ती महिला हुन् जसलाई डायमण्ड प्रिन्सबाट उद्धार गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय गाेलिकपर एलन न्यौपाने फुटबल छाडेर अष्ट्रेलियातर्फ
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर अष्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन् । नेपाली फुटबललाई बिट मार्दै उनले आफ्नो भविष्यका लागि अष्ट्रेलियातर्फ लागेका हुन् ।